October 2012 - शखदा साहित्य
इमेल नम्बर तीन
12:23 AM कथा
प्रिय गौरव, सुमधुर प्रेम !
अचानक तिम्रो मेल पाउँदा मलाई निकै अचम्म लागेको छ । आठ महिनापछि आएको तिम्रो मेललाई मैले सपना हो कि विपना छुट्याउन सकेकी छैन । यसलाई हर्ष भनौँ कि विस्मात मैले केलाउन सकेकी पनि छैन । तर तिम्रा शब्द र शैलीले यो तिम्रै मेल हो भनेर मैले विश्वास गरिसकेकी छु । यसरी विश्वास नगर्नुको कारण तिम्रो मेलको प्रतीक्षामा मैले सबै यथार्थलाई पनि भ्रम हो भन्न थालिसकेकी छु । जब म प्रत्येक पल तिम्रो मेलको प्रतीक्षामा हुन्थेँ त्यो बेला मैले सबै भ्रमलाई यथार्थ मान्न पुगेकी थिएँ । त्यसैले यो यथार्थ एकपल्ट मैले भ्रम ठान्न पुगेँ । यहाँसम्मकी मैले पठाएको मेलको तिमीले एक शब्दसम्म लेखेर प्रतिउत्तर दिन आवश्यक ठानेनौ । मेरो मेल पढेर ढुङ्गाझँै हृदय भएको मानिसको हृदय पनि पग्लन्थ्यो होला तर तिम्रो हृदय पग्लेन । तिमीले मलाई एउटै पनि प्रतिउत्तर पठाउन सकेनौ । मैले पठाएको त्यो मेल यस प्रकारको थियो —
म तिम्रो प्रतीक्षामा बाटोभरि आँखा बिछ््याएर बसेकी छु । तिमीसँगको प्रत्येक पलले मेरो आँखा ब्यूँझाइरहन्छ । प्रेमको असीम आनन्दमा डुब्दै त्यसलाई साक्षात्कार गर्दै अलौकिक आनन्दमा डुवेको क्षणमा कति तृप्ति हुन्छ म भन्न सक्दिनँ । तिम्रो प्रेम कोही बेला मधुर धुन बनेर मेरो कानमा गुन्जन आइपुग्छन् भने कोही बेला तिम्रो सम्झनाको तरङ्ग झङ्कृत भएर मेरो मानसपलमा सादृश्य हुन आइपुग्छन् । त्यो तृष्णामा छटपटाउँदै जब म यथार्थमा आउँछु त्यहाँ शून्यता पाउँछु । शून्यबाहेक अरू केही हुँदैन । त्यहाँ सबै कुरा रित्तो पाउँछु । मेरो हृदयका असीम पीडा झरना बनेर आँखाबाट झर्न थाल्छन् । कोहीबेला सबै पीडा समेटेर एउटा ठूलो पीडामा परिणत गर्छु र त्यसबाट एउटा ठूलो शक्ति प्राप्त भएको महसुस गर्छु जसरी पानीको बाफबाट रेल चल्न ऊर्जा प्राप्त गर्छ । हो त्यस्तै ठूलो ऊर्जा आफूभित्र सन्चित भएको महसुस गर्छु । त्यो उर्जामा म एउटा ठूलो शक्ति पाउँछु र म जीवनमा जुनसुकै उतारचढाव आए पनि अब लड्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास पैदा गर्छु । साँच्चै तिम्रो मायाले मभित्र कति ठूलो शक्ति पैदा गरेको छ । तिमी त्यसको अनुमान पनि लगाउन सक्दैनौ । मभित्र त प्रेम नै प्रेम रहेछ अनि त यति ठूलो शक्ति प्राप्त हुनसक्यो । नत्र कसरी प्राप्त हुन्थ्यो होला र होइन ? वास्तवमा म त प्रेमको धनी रहेछु । तिमी पो गरिब रहेछौ । तिमीलाई मैले प्रेम दिनुपर्छ । तिमीबाट लिने वा लिन चाहना गर्ने होइन किनभने जोसँग प्रेम छ उसले मात्र दिन सक्छ र यी सब अनुभूत गर्न सक्छ । जीवन अनुभूतिको सागर हो गौरव, यो सागरको भन्डारबाट अनुभूतिको ज्ञान जसले लिन सक्छ उसले ठूलो मोक्ष पाउन सक्छ । तर तिमीले यी सब कुरालाई लिन सकेनौ । त्यसैले तिमीमा धेरै कमी छ । मभित्रको त्यो अलौकिक प्रेमको शक्ति खै तिमीले अनुभूत गर्न सक्यौ र ? तिमी त भौँतारिरह्यौ मात्र क्षणिक वासनाको लागि । अनि त्यसैलाई जीवनको ठूलो उपलब्धि ठान्न पुग्यौ । त्यो एउटा भोक क्षणिक हुन्छ र आत्माको गहिराइदेखि धेरै टाढा हुन्छ । जहाँ तिमीले प्रेमको स्वर्गीग आनन्द पाउन सक्दैनौ । तिमीले जीवनमा एउटा गहिरो प्रेमबाट पाउने तृप्तिलाई कहिल्यै लिन सकेनौ । त्यो तृप्ति तिमी टाढा बसेर पनि लिन सक्थ्यौ । तर तिम्रो सोचाइको सीमारेखा त्यहाँसम्म पुग्न नै सकेन । त्यसैले अब म आपूmलाई रित्तो र निरीह ठान्न छाडेकी छु । म त यति धेरै सम्पन्न र शक्तिशाली रहेछु भन्ने अनुभूत हुन थालेको छ । मभित्र यो शक्ति एकएक पल तिम्रो प्रेमको तड्पनमा सङ्ग्रहित भएका छन् । यो शक्ति त्यसै आएको छैन । कसरी भनेर तिमी भन्छौ भने सुन म धेरै दिनसम्म तिम्रो तृष्णामा तड्पिरहेँ । तिमी र म घुमेको प्रत्येक ठाउँमा तिम्रो पदचापको ध्वनि सुन्न हराइरहेँ । तिमी र हामी घुमेको ठाउँ र त्यो मधुर मिलन भएको दृश्यमा हराइरहेँ । प्रत्येक पल आफूलाई त्यसको आराधानामा डुबाइरहँदा ढुङ्गा पनि देवता बन्दो रहेछ भनेको हो रहेछ । यसरी मैले प्रत्येक पल तिम्रो सम्झनाको आराधानामा लगाइरहेँ । त्यसपछि मभित्र ठूलो ईश्वरीय शक्ति प्राप्त भएको महसुस भयो । अब म जस्तो सुकै परिस्थितिसँग पनि लड्न सक्छु भन्ने शक्ति प्राप्त भयो । मैले अब नौलो अनुभूतिले जीवनलाई प्रेरणादायी बनाएर बाँच्ने प्रण गरेँ । त्यो बाँच्ने शक्ति तिम्रै प्रेमले दिएको छ । तिमी पनि जहाँ कहीँ छौ सक्छौ भने त्यो अलौकिक प्रेमको चरम आनन्दमा हराउने गर । तिमी आपूm हारेको अनुभव हुन ेछैन र आपूm दुःखी भएको महसुस पनि गर्ने छैनौ । तिमीले जीवनमा नयाँ शक्ति पाएको महसुस गर्नेछौ ।
उही तिम्री हिमशिखा
तिमीलाई मैले यो पछिल्लो मेल पठाएपछि तिम्रो कुनै प्रतिउत्तर आएन । कैयौँ दिन तिम्रो मेलको प्रतिउत्तरका लागि म भाँैतारिरहेँ । जब तिम्रो यो मेल हात प¥यो त्यसपछि यसलाई सुक्ष्म रूपले विश्लेषण गरेर पढेँ । तिमीले मलाई धोका नदिएको कुरा बारम्बार लेखेका रहेछौ तर अन्तिममा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु के सङ्गीताको मृत्यु नभएको भए तिमी मलाई सम्झेर फर्केर आउँथ्यौ ? के तिमी सङ्गीतालाई छोडेर मलाई अपनाउँथौ ? यो सम्भव छैन । किनकि तिमी सङ्गीतालाई कुनै पनि हालतमा छोडेर आउन सक्दैनथ्यौ । आएको भएपनि तिम्रो आत्माले तिमीलाई धिक्कारिरहन्थ्यो । तिम्रो सबै कथा पढेर मैले कुनै निर्णय लिन सकेकी छुइनँ । एकपल्ट म फेरि विचलित बनेको छु । तिम्रो सबै कथा पढिसकेपछि मैले पनि आफ्नो कथा तिमीलाई सुनाउन जरुरी सम्झेको छु । तिमीले मलाई छोडेर हिँडेपछि तिम्रोजस्तो मेरो पनि जीवनमा केही घटना घट्न गयो । मेरो आफ्नै काकाकी छोरी जो भर्खर प्लस टु पढ्दै थिई । उसले स्लिपिङ्ग ट््याबलेट खाएर आपूmलाई सुसाइट गर्न खोजी । उसलाई निकै दिन अस्पतालमा राखेर उपचार गरेपछि निको भई तर यसले हाम्रो परिवारमा छोरीलाई नहेर्ने नजर नै अर्को हुन थाल्यो । भएको के रहेछ भने उसको एउटा केटासँग प्रेम रहेछ । उनीहरू पोखरा घुम्न पनि गएका रहेछन् । पोखरामा उसले त्यही केटासँग रात बिताएकी रहिछ । त्यो केटाले उसका सम्पूर्ण यौनक्रिडाका भिडिओ खिचेको रहेछ । पछि उसले सो भिडिओ सार्वजनिक गरिदिने भनेर व्ल्यमेल गर्न थालेछ । यसको डरले उसले सुसाइट गर्न खोजेकी रहिछ । हामी नारी जाती कति कमजोर हुँदा रहेछौ । आफ्नै पे्रमीले आपूmमा यति ठूलो विश्वासघात गर्दा पनि थाहा नपाउने । त्यसपछि हाम्रो घरमा सबैको नजर ममाथि पर्न गयो । मैले पनि यस्तै खराब काम गछर््ु कि भन्ने सबैलाई डर भयो । अब मैले कि त मेरो प्रेमी भए प्रेमी देखाउनुपर्ने नत्र भए बिहेको लागि बुबाआमाले हेरिदिएको केटासँग राजी हुनुपर्ने बाध्यता आयो । सायद तिमी यहाँ भएको भए म तिमीलाई प्रस्ताव राख्थेँ र घरपरिवारलाई भन्थेँ तर तिमी त मदेखि धेरै टाढा कुन संसारमा थियौ मलाई पत्तो भएन । त्यसैले मैले बुबाआमाले रोजेको केटोसँग विवाह गर्न राजी भए । केटा काठमाडौँकै उच्च घरानको शिलस्वभाव राम्रो भएको छ । धेरैको मुखबाट उसको प्रशंसा सुनेपछि मैले विवाहको लागि राजी भइदिएको छु । ऊ परिवारको मात्र होइन गाउँको नै उदाहरण बनेको आदर्श पुरुष रहेछ । अहिले हामीबीच राम्रो सम्बन्ध भएको छ । हामीले एकअर्कालाई राम्रोसँग बुझिसकेका छौ । विवाह आउन अब पन्ध्र दिन मात्र बाँकी छ । हामी दुवैको सरसल्लाहले सबै किनमेल गरिसक्यौँ । ऊबाट म निकै प्रभावित छु । जिन्दगीलाई नयाँ गोरेटोबाट ऊर्जाशील बनाएर बाँच्ने प्रेरणा तिम्रै प्रेमले मलाई दिएको छ । वास्तवमा बाँच्नलाई काल्पनिक प्रेमभन्दा व्यावहारिक प्रेम नै चाहिँदो रहेछ । काल्पनिक प्रेमले अवास्तविक जीवनमा बाँच्न प्रेरणा दिँदो रहेछ भने व्यावहारिक प्रेमले जीवन बाँच्नलाई चाहिने भौतिक आधार दिँदो रहेछ । अहिले मसँग दुवै प्रेम छ काल्पनिक प्रेम पनि र व्यवहारिक प्रेम पनि । अब मलाई बाँच्न कुनै कठिन पर्दैन । तिमीले मलाई यति ठूलो प्रेमको उपहार दिएका छौ त्यसको लागि म जीवनभर तिम्रो ऋणी हुनेछु । सक्छौ भने तिमी पनि त्यो प्रेमबाट कुनै शक्ति अनुभूत गर्ने गर तिमीले जीवनमा ठूलो आत्मसन्तुष्टि पाउनेछौ । यो हाम्रो अन्तिम मेल पनि हुन सक्ने कुरा पनि तिमीलाई म बताउन चाहन्छु ।